ဲသံတွဲ မထသ ငွေကြေးအရှုပ်တော်ပုံပေါ်ပေါက်ပြန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste »ဲသံတွဲ မထသ ငွေကြေးအရှုပ်တော်ပုံပေါ်ပေါက်ပြန်
ဲသံတွဲ မထသ ငွေကြေးအရှုပ်တော်ပုံပေါ်ပေါက်ပြန်
Posted by Aoewaimaungkoyu on Nov 20, 2011 in Copy/Paste | 48 comments
သံတွဲမြို့ မတသလိုင်း လက်အောက်ခံ လိုင်းအမှတ်(8)သံတွဲဂွ ပြေးဆွဲနေသော ကားလိုင်း၌ ဂိတ်မှူးဦးကံထွန်း ဆိုသူမှ ငွေ ၃၅ သိန်း လိမ်လည်၍ တိမ်းရှောင်နေပြီး အဆိုပါငွေကြေးအား လိုင်းအမှတ်(ဂ)ဥက္ကဋ္ဌနှင့်မြို့နယ် မထသ တို့မှ ကာကွယ်ပေးထားသည်ဟုသိရသည်၊
အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ သံတွဲ ဂွလိုင်းမှ ယဉ်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းသောအခါ “ဟုတ်ပါတယ် လိုင်း(ဂ)ဥက္ကဋ္ဌ ကယဉ်ပိုင်ရှင်တွေဆီက ရန်ပုံငွေတွေထပ်ကောက်ပါတယ် အရင်ငွေတွေက ဦးကံထွန်းလိမ်သွားတာပါသွားတယ်နောက် အရင်ခယက ဥက္ကဋ္ဌအဟာင်းဦးတင်ဆန်းက ကားလိုင်းတွေကို ငွေ(၁၀)သိန်း စီ ချေးငွေပေးတယ် ဒါကိုကျွန်တော်တို့ ယဉ်ပိုင်ရှင်တွေ မသိရဘူး နောက်မှဦးကံထွန်း လိမ်ပြေးတဲ့ငွေကို စိုက်ပြီးဆပ်ရမယ်ဆိုပြီး ယဉ်ပိုင်ရှင်တွေဆီက ထပ်ကောက်တယ် ဦးကံထွန်းကို တစုံတရာ အရေးယူတာလဲမရှိဘူး ခယက ချေးငွေဆိုတာလဲ ယဉ်ပိုင်ရှင်တွေဘာမှမသိရဘူး ဒါဝိုင်းလိမ်တာပေါ့ ငွေလိုပြီဆိုရင် ယဉ်ပိုင်ရှင်တွေကို ညှင်းဆဲပြီ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကောက်တဲ့ငွေကလဲ မပြီးနိုင်တော့ဘူး ကြာရင် ကားလုပ်ငန်းလုပ်စားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး”ပြောဆိုသွားပါသည်
သံတွဲမထသ သည်ရန်ပုံငွေအများဆုံး ကိုင်တွယ်အသုံးပြုရသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါငွေများအား မော်တော်ယဉ်ပိုင်ရှင်များမှ ထည့်ဝင်ပေးရခြင်းဖြစ်သည်၊ဒေသတွင်း အရာရှိအရာခံများ၏ ကိုယ်ပိုင်ငွေများကိုလဲ အတိုးဖြင့်ချေးငှားခွင့်ကိုလဲ ရရှိနေပြီး ဥက္ကဋ္ဌ များမှထိုငွေများအားအထူးချေးငှားခွင့်ရရှိသောကြောင့် မထသဥက္ကဋ္ဌ ရွေးချယ်ပွဲမှာ အပြိုင်အဆိုင်များသော ရွေးချယ်ပွဲဖြစ်ပြီး အဆိုပါအသင်း၏ ရန်ပုံငွေ လက်ဝယ်သုံးစွဲခွင့်ရရှိရေးပြိုင်ဆိုင်မှုမှာ သံတွဲမြို့ ပြသနာအရပ်ရပ်ဖြစ်ပွားရခြင်း၏ ၉၉% ဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံများကသုံးသပ်သည်၊
ပြောနေပြန်ပီ. ရမ်းသန်းပြီးတော့ မောင်သီဟရေ. နင်တို့ မလဲ အရင်တစ်ခေါက်က နာရေးအသင်းကိစ္စနဲ့ 
မဟုတ်မမှန်တာရေးလို့ဖြေရှင်းမပေးနိုင်ဘဲ. ပိတ်သိမ်းခံခဲ့ရပြီးပီ.။အမှတ်သညာနည်းတယ် လူတွေများနော်။လူလိမ်
Thihaရေ………မင်းကတော့လိမ်ပြီးရင်းလိမ်နေပြန်ပြီ။အခုလည်းအမှန်တရားကိုပြောပြ၇အုံးမှာပေါ့ ၊မော်တော်ယာဉ်လိုင်းပေါင်းစုံထိမ်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီဆိုတဲ့အသင်းဟာသံတွဲမြို့မှာစနစ်တကျ ဖွဲ့စည်း ထားတဲ့အသင်းတစ်သင်းပါ။မင်းပြောတဲ့ကိစက(၂၀၀၉)ခုနှစ်ကဖြစ်တာလေ၊ ဒီကိစကအခြခံလိုင်းအမှတ်(၈)မှာဖြစ်ပြီးမင်းပြောသလိုငွေမများပါဘူးကွာ။ဒါကိုလည်းမြို့နယ်(မထသ)က သိလို့ ယာဉ်ပိုင်ရှင်အားလုံးကိုခေါ်ပြီးအားလုံးရဲံ့သဘောတူညီချက်နဲ့ဂိတ်မှုးဦးကံထွန်းကိုတရားစွဲဆို အမှုဖွင့် ထားပြီးတရားဥပဒေကြောင်းအရဆောင်ရွက်ထာ.းတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။အခုတော့ မင်းကကုလားမဒေါ် စိန်စိန်ပြောတာနဲ့ကောက်ရေးတော့တာဘဲ။မင်ပြောသလိုလူနှစ်ယောက်က ကာကွယ်ပေးထားတယ်ဆိုတာကုလားမလိမ်ပြောမှန်းသိပြီလားကွ။အဲဒီကုလားမကကောလိုင်းတွင်းမှာ ဘယ်သူနဲ့မှမတည့်တဲ့ယာဉ်ပိုင်ရှင်ကွ၊မသိရင်လိုင်း(၈)မှာစုံစမ်းကြည့်အုံး။ဒီကိစကိုဟိုတိုင်ဒီတိုင်လုပ်ပြီးပြီ ၊မရတော့လို့အင်တာနက် မင်းသားချောကြီးကြံ့ခိုင်ရေးဆီကိုရောက်လာတာပေါ့။ မင်းကတော့မန်းဂဇက်မှာမဟုတ်တာရေးတာတော့နံပါတ်တစ်ပဲ၊သူကြီးကလည်းဒီ Thihaဆိုတဲ့ကောင်ကိုထုတ်သ့င်နေပြီဗျာ၊အရင်တစ်ခေါက်ကလည်း မင်းမှန်တာရေးတာဆိုရင်လိပ်စာနဲ့ဖုံးနံပါတ်ဖော်ပြပေးဆိုတော့မဖော်ပြရဲလို့ပိုစ့်အပိတ်ခံရပြီးပြီလေ။ မင်းရေးမယ်ဆိုလည်းကုလားမစိန်စိန်ဈေးထဲမှာအမဲကဆိုင်ဆွဲထားပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနဲ့မရောင်းဘဲ သံတွဲပြည်သူတွေကိုမတန်တစ်ဆဈေးနဲ့ရောင်းစားပြီးအမြတ်ထုတ်နေတာကိုတော့ဘာဖြစ်လို့မရေးတာ လဲ။အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းအများအတွက်ရေးပေးမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ရပါတယ်ကွာ။အင်တာနက် မင်းသားချောကြီး ပြည်ခိုင်ဖြိုးရေဘေးရန်ကင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။။။။
ပုံပြင် လာမပြောနဲ့ ကိုဗိုက်ပူ ၊ အမှန်ပြောသူတွေကို ကြံ့ဖွံ့ဆိုပြီး စာဝင်ဖတ်သူတွေ
ကို အာရုံလွှဲ ယုံလေးနဲ့ အမှန်ဖြစ်ရပ်တွေက ပျောက်ပျက်မသွားဘူး ငါ့ကောင်ရ ၊
ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကျန်းမာအောင်နေ ၊ ရိတိတိနဲ့ သူများအတွက်ဆုလာတောင်းပေးလဲ
ဘယ်သူမှ လက်မခံဘူးငါ့ကောင်၊ ကိုယ့်ဝဋ်နဲ့ကိုယ်ကျေနပ်နေတာ အံ့သြတယ်၊
မင်းက ဂျပိုးကိုလိပ် ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပေမဲ့ အရာမထင်ဘူးကွ၊
အာဏာရှင် ကို ဖားပြီး အောက်ကိုဖိ တဲ့ မင်းနဲ့ ပြည်သူဖက်က ငါတို့နဲ့
တွေ့ရချိန် နီးကပ်လာပြီ ကပ်ဖားစီးပွါးရေးသမားရေ..
အာဏာရှင်ရဲ့ပါးကွက်သား ရေ. လာဖြေရှင်းနေတာလား. မန်းဂေဇက်မှာပဲရမနော် .
နာရေးအသင်းကိစ္စလဲ မှန်နေတာ. မြို့အာဏာရှင်တွေက သတင်းတင်သူတွေကို
လိုက်ရှာနေတော့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ကျုပ်ဘယ်သူပါ ပြောရဲမတုန်းဟ.
အကျိုးလိုလို့ ညောင်ရေလောင်းတဲ့ ၊ လူကြီးလာရင် လက်ညိုးထောင် သွားအဖြီးသားနဲ့
ကပ်ဖားစီးပွါးရေးသမား ကသာလျှင် ဖုံးနံပါတ်ပေး ပြီး စိုးရိမ်တကြီး ဝင်ရှင်းသွားလေရဲ့.
ထပ်ပြီးပြောလိုက်မယ်. Mandalay Gazette မှာပဲ လိမ်လို့ရမယ်.
သမိုင်းတင်ကျန်ရစ်မှာ နဲနဲမှ မစဉ်းစားမိတဲ့ အတ္တ ဝါဒီတွေ .
မိမိကိုယ်ပိုင်စီးပွါးရေးကို ကိုယ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘဲ ဟိုမှာရှုပ် ဒီမှာရှုပ်တော့ ပုပ်မှာဘဲ၊
ပုပ်ရင်ပေါ်မှာပေါ့ ၊ မင်းတို့သေချာသိချင်ရင် thei11@ ကိုလာခဲ့ ၊ သေချာပြောပြပေးမယ်။
သံတွဲမြို့ မှာလဲ တစ်ဖွဲ့က မြို့ အာဏာပိုင်တွေ အကြောင်းတင်ပြရင် အားလုံးကောင်းပါတယ် ဆိုပဲ
သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ ဘယ်သူတွေက ဘယ်ဖက်က ဆိုတာ အရှင်းသား ။
NGO အဖွဲ့ ဦးစီးခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူတွေက အဂတိ လိုက်စားမှုကင်းရပါမယ်
ခုတော့ ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်း ကပ်တွန်း ကောင်တွေက အပေါ်ရောက်နေတာမို့
အောက်က အများပြည်သူတွေ နစ်နာတာလေ ၊
“မင်းပင်ကောင်းလျှက် မင်းမြှောင်ဖျက်၏ ” ဆိုရိုးစကားအတိုင်း အာဏာရှင်တိုင်းတော့
မဆိုးကြဘူးလို့ထင်တယ်၊ ကပ်မြှောင် ကပ်ဖားတွေကြောင့် သူတို့ခမျာတွေလဲ
တစ်ဖြည်းဖြည်း အကျင့်ပျက်တွေ ဖြစ်လာကြတာနေမှာ ။
လိုင်း (၈) ဥက္ကဌ ကငွေတွေလိမ်ပြီးပြေးသွားတာကို အဲဒီဂိတ်က ကားသမားတွေက မသိဘူးလားဗျ ။ သိရက်နဲ့တော့ ငြိမ်ခံနေမယ်မထင်ဘူး ။ လူနှစ်ဦးကာကွယ်ထားတာနဲ့ အဲဒီကိစ္စက ပြီးသွားမှာလား ။ ဟုတ်တယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ တွေကဖြေရှင်း အရေးယူတာတွေမလုပ်ဘူးလား ။ ဘယ့်နှယ်ဗျာ မော်တော်ယာဉ်လိုင်းပေါင်းစုံထိမ်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီဆိုတာ တစ်မြို့လုံးက စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ ၊ သူဌေးတွေ အဲဒီလူတွေက ငွေကြေးကိုမက်မောကြီးကျပြီး ရူးသွပ်နေကြတာတော့ ရှက်စရာကောင်းပါတယ် ဗျာ ။ ခက်တော့ခက်ကုန်ပြီကွယ်ရို့ ။ အီကြာကွေးစကားငှားသုံးရရင် ဟိုက် .. ရှာလပတ် ။ ။ ။
ဘယ်လိုကြောင့် ဖုံးဖိထားရာကနေ ပေါ်လာတာလဲ။ထိထိရောက်ရောက်အရေးမယူတဲ့အပြင် ကာကွယ်ထားတယ်ဆိုတော့
အပြစ်ကြီး ကျူးရာကျမနေဘူးလား။အရှုပ်တော်ပုံတွေထဲက တစ်ခုတော့ လာပြန်ပီ။မဆုံးတဲ့ သံသရာမှာ အပယ်မှာစံ၊အဝေစိ ဂျိုးကပ်မယ့်
ကောင်တွေပါလား ကွာ။မရှက်မကြောက် ရိပ်သာဆောက်မယ့် ဘိလပ်မြေခိုးရောင်စား၊အတုနဲ့ လဲတဲ့ ဟိုငနာမှာ ဦးလေးတော်စပ်တယ်ဆိုတယ်
မလား။ကြည့်လုပ်ပါအုံး ကိုထွန်းဝေရယ်(ဥက္ကဠ)။ခင်များကြီးမလဲ သူခိုးဓားကမ်း လုပ်ပြီး၊တရားဝင်ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့ နာရေးကူညီမှူအသင်းကို
တောင် ဒုက္ခပေးပြီး ဥက္ကဠနေရာအပ်ဖို့အမိန့် ပေးစေခိုင်းနေတာ မရှက်ဘူးလား။
The Angry Man ရေ…မသိရင်မှတ်ထား၊ဦးကျော်ကျော်တို့နာရေးကူညီမှုအသင်းက(၂၀၁၀) တည်းက တရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။နောက်မှပေါ်လာတဲ့အသင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဦးကျော်ကျာ်တို့ အသင်း က မော်တော်ယာဉ်နဲ့ပို့တဲ့အသင်းမဟုတ်ပါဘူး။လူတစ်ယောက်ဟာသေဆုံးသွားခဲ့လို့ ကျန်ရစ်ခဲံ့သူမှာငွေကြေးချို့တဲ့ရင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အသင်းပါ။သံတွဲမြို့မှာနာရေးအသင်းက များလေကောင်းလေပါဘဲ။ဒါကကုသိုလ်ရေးလုပ်ကြတာလေ။းဒီအလုပ်ကပရဟိတအလုပ်ဆိုတော့ ကောင်းတာလုပ်သူတွေကိုအကောင်းမြင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။။။။။
သံတွဲမထသ သည်ရန်ပုံငွေအများဆုံး ကိုင်တွယ်အသုံးပြုရသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါငွေများအား မော်တော်ယဉ်ပိုင်ရှင်များမှ ထည့်ဝင်ပေးရခြင်းဖြစ်သည်၊ဒေသတွင်း အရာရှိအရာခံများ၏ ကိုယ်ပိုင်ငွေများကိုလဲ အတိုးဖြင့်ချေးငှားခွင့်ကိုလဲ ရရှိနေပြီး ဥက္ကဋ္ဌ များမှထိုငွေများအားအထူးချေးငှားခွင့်ရရှိသောကြောင့် မထသဥက္ကဋ္ဌ ရွေးချယ်ပွဲမှာ အပြိုင်အဆိုင်များသော ရွေးချယ်ပွဲဖြစ်ပြီး အဆိုပါအသင်း၏ ရန်ပုံငွေ လက်ဝယ်သုံးစွဲခွင့်ရရှိရေးပြိုင်ဆိုင်မှုမှာ သံတွဲမြို့ ပြသနာအရပ်ရပ်ဖြစ်ပွားရခြင်း၏ ၉၉% ဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံများကသုံးသပ်သည်၊
ကိုယ့်ညီကိုတို့ ပြောသလိုသာဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တောင်သဘောကျတယ်။တခါလောက် အကျိတ်အနယ်ဝင်ပြိုင်အုံး
မှပါလား။အသင်းတစ်သင်းရဲ့ ရံပုံငွေကို ခုလိုအလွဲသုံးစားလုပ်လို့ ရတာ ခုမှဘဲကြားဖူးတော့တယ်။ကိုယ့်ညီကို တို့ လို ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်
တွေက ပိုစွမ်းမှာပါ။ဝန်ကြီး ဦးလှဟန်ရေ မင်္ဂလာယူမနေနဲ့ခင်များအောက်က လူတွေအင်တာနက်ကဖွချက်တွေကိုဝင် လေ့လာပါအုံးလား လို့ 
နင်တို့ ပြောနေသလို ပြဿနာရံပုံငွေတွေဆို တာတခါမှမကြုံဖူးလို့ သိရင်အထောက်အထားလေးနဲ့ ပြောပြပါလား ကိုယ့်ညီကို။
အော် အများသူငါထက် ပိုရှုပ်တဲ့ မြို့ သံတွဲပါလား။
နှစ်လုံးထီ၊သုံးလုံးထီဒိုင်၊အများပိုင်၊ဌာနပိုင်ငွေ တွေကို ဘတ်ပြီးပြေးကြ
တဲ့လူတွေ. လူတွေ ။မလိုလာဘ ဇောကို မသတ်နိုင်သေးသရွေ့ ဒီသံသရာဝဋ်ဆင်းရဲ ပြေးမလွတ်နိုင်……;(
ကောင်းတယ် အကိုတို့ ဆက်ပြီးရေးပေးကြပါ၊တိုင်စာများများရေးပေးပါခင်များ။
ဒါမှ ကျနော်တို့ တွေ ကြားရ၊သိရတဲ့ပြင် အားလုံးသူက သိသွား၊မြင်သွားတာပေါ့။
အဲဒီတော့ဗျာ. အကိုတို့ ကို ဆက်ပြီး ကူညီအားပေးနေပါမည်ဟု ဆန္ဒပြုလျှက်ပါ။
အဖျက်သမားတွေ အဖျက်သမားတွေ မှန်တာကိုပြောတော့ ကြောက်ရွံ့ကြ ထိတ်လန့်ကြနဲ့ ၊
မရဲတရဲနဲ့ အာဏာရှိသူတွေ အကြောင်းတင်ပြတဲ့သူတွေကို ကြံ့ဖွံ့ နဲ့လှည့်တိုက်
သတင်းဖတ်သူတွေ အထင်လွဲအောင် ရည်ရွယ် ၊
အတောမသတ်နိုင်အောင် မိုက်မဲတဲ့ ငနာတွေ ၊ အဲဒီ မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ ကြောင့် သံတွဲကို
အထင်သေးခံရ ၊ မင်းတို့ ဘယ်တော့များမှ အပေါက်ကြမ်းကို ပိတ်တော့မလဲ ၊
သတင်းသမားတစ်ယောက်က အမှန်ကိုဘဲရေးရတယ် အထပ်ထပ်စီစစ်ပြီးတော့ရေးရတယ် ဘက်လိုက်လို့မရဘူး ခုဇြစ်တဲ့ကိစ္စမှာပိုစ်တင်ခံရတဲ့လူက တရားဝင်ဖြေရှင်းရင် ဒါကသူရသင့်တဲ့အခွင့်ရေးပါ မှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတဲ့အဆုံးအဖြတ်က အုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ လေ့လာဆုံးဖြတ်ချက်တွေက အတည်ဖြစ်ပါတယ် ပြည်သူဘာပြောလဲဆိုတာ နားထောင်မိဘို့ကတော့ အရေးကြီးတယ် မန်းဂေဇက်မှာရေးနေကြတဲ့ အမှန်ရေးသတင်းသမားတွေဟာ ဖားမင်းဆွေ အောက်ဆွဲတွေ မဟုတ်ကြပါဘူးတချို့ဆို မန်းဂေဇက် ကိုသုံးရင် ဖမ်းခံရမယ်ဆိုလို့ မသုံးရဲဘူးလို့သိရတယ် ဒီအခြေနေမျိုးမှာ သံတွဲဘက်ကတင်ရဲတဲ့ သတင်းသမားတွေကိုလေးစားမိပါတယ် နာရေးငွေကြေးလိမ်လည်မှုဟာလဲအမှန်ပါ သတင်းတစ်ခုလိုက်ရင်းခရီးလွန်နေလို့မရှင်းလိုက်နိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါ ဒီကိစ္စကို အတွင်းကြိတ်ဖြေရှင်းပြီး ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တွေအားကိုးနဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်တွေကို ခြောက်လှန့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ဟုတ်မဟုတ်သံတွဲက မင်ဘာတွေကသက်သေခံပါလိမ့်မယ် ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရေးမယ် မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းရေးမယ် ကိုယ်တိုင်ဆင်ခြင်ပြီးနေပေါ့ မထသဥက္ကဋ္ဌ ပြသနာကသံတွဲမှာတော်တော်ကြီးကျယ်တယ်ဆို ဥက္ကဋ္ဌ လုပ်ချင်သူတစ်ယောက်ရဲ့ မဲဆွယ်မှုကုန်ကြစရိတ်ကတော်တော်ကုန်ကြတယ်ဆိုဘဲ ခွေးမစင်ကြိုက်သလို မျိုးတဲ့ ဆင်ချင်ကြပေါ့ ကောင်းတာလေးလဲရေးချင်သေးလို့ ကောင်းကွက်လေးတစ်ကွက်တော့ကပြပါဦးလားဗျာ ကိုယ်အကျိုးရှိဘို့ အများအကျိုးပျက်စီးမယ်ဆိုရင် ရှောင်သင့်ပါတယ် ဆင်ခြင်ကြဘို့လိုပြီ လန်ကျုပ်ရှင်းတန်းတွေနဲ့ ပြည်သူကိုမလိမ်ပါနဲ့
ဒီင်္လိ်ုဇာတ်လမ်း၊ဇာတ်ကွက်လေးဖြစ်လာဖို့ တော်တော်လေးကိုအချိန်ပေးလိုက်ရမယ်ထင်တယ်……..ဒီအဆင်တွေက သိနေပြီးသား။ ဘယ်နေ့မှာ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ပေါ်လာမလဲဆိုတာကိုပဲ ကြည့်နေတာ။ ရေးပုံရေးနည်းတွေကြည့်ပြီးတော့ကို သိနေတာ။ ရေးပုံတွေက မူမှမမှန်ဘဲ။
အာရက္ခ မြေသား ၊ မောင်တုတ်ကြီး စတင်ဝင်ရောက်လာစဉ်က Thantwethar ၊ မေသခင် ၊ နဲ့တခြား အကောင့်တွေက အတူတူပါဘဲ ဘာညာပေါ့။ ဟိုဘက်ကလည်း ဒီပုံအတိုင်းပဲ Thantwethar ၊ မေသခင် ၊အာရက္ခ မြေသား ၊ မောင်တုတ်ကြီး အတူအတူပဲပေါ့။ အပြန်အလှန်ကို တိုက်ပွဲတွေ ဆင်နွဲလိုက်ကြတာ။ ဒါကြောင့် မေသခင် ငြိမ်ပြီးတော့ ကြည့်နေတာ
နောက်တော့ အာရက္ခ မြေသား က သူ့ကိုသူ ကျော်ကျော်လိုလိုဘာလိုနဲ့ ဒီဇိုင်းမျိုးတွေရေးတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ မောင်တုတ်ကြီးကလည်း နောက်က ဘာညာသာဓကာပေါ့။တော်တော်လေးကို အချိန်တွေပေးခဲ့ကြတာပဲ။ဒါတွေက ကိုယ်နဲ့တော့ မဆိုင်ပါဘူး။ မမြင်နိုင်လို့ဝင်ပြောတာ။ နောက်ဆုံးတော့ နင်တို့တွေက အွန်လိုင်းပေါ်တက်ပြီး ကျော်ကျော်အတင်းကိုပြောကြတာပဲ။ ပိုစ့်မှာမပါလည်း ကောမန့်တွေမှာ ကျော်ကျော်အကြောင်းပါတာပဲ။ နင်တို့တွေ ဘယ်လိ်ုပဲဖန်တီးပြီးယူယူ ဒါဟာဘာပိုက်ဆံမှလည်းရတာမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်သူကမှလည်း အသိမှတ်ပြုစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူး။
နင်တို့ မနာလိုရင်လည်း မနာလိုစရာ မုန်းရင်လည်း မုန်းချင်စရာပါပဲလေ။ ငါကတော့ အတုယူစရာ လေးစားစရာလို့သတ်မှတ်တယ်။ ကျော်ကျော်က အသက်(38) တောင်မရှိသေးဘူး။ ကုန်တင်ကားကြီးက(5) စီး၊ ကိုယ်ပိုင်ကားလေးက(1)စီး၊ အိမ်ကြီးကလည်း စင်္ကာပူဒီဇိုင်းဆောက်ထားလိုက်တာ ဟီးလို့၊ ရခိုင်တပြည်နယ်လုံးမှာ တစ်လုံးမှမရှိသေးတဲ့ အိမ်ဒီဇိုင်းလေးနဲ့။သံတွဲမှာ တခြားဂိတ်အဆောက်အဦးတွေလည်း ပိုင်ထားတာရှိတယ်မလား ။ပြည်မှာရော၊ရန်ကုန်၊သံတွဲမှာပါ မြေကွက်တွေလည်း ၀ယ်ထားသေးတယ်မလား ။ရန်ကုန်မှာ ကွန်ဒို တိုက်ခန်း လည်းရှိတယ်မလား။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကလည်း အများကြီး။အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်နေကြတာ။ အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ လင်ရော မယားရော အားကျဖို့ကောင်းအောင်ကို အလုပ်လုပ်တာ။ မိဘ နောက်ခံအသိုင်းအ၀ိုင်းကလည်းတောင့်တင်းတယ်။ချမ်းသာလိုက်ကြတာမှ အဆင့်အတန်းရှိရှိကို သူတို့လင်မယားကချမ်းသာတာ။ မြို့ပေါ်သာရေး၊နာရေး လက်ညှိုးထိုးမလွဲ လှူထားကြတာ။ လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကပညာတတ်အသိုင်းခေတ်လူငယ်လေးတွေ။
လူမှုရေး၊ အင်မတန်ကောင်းကြတဲ့ လင်မယား၊ စိတ်ထားပြည့်ဝကြတယ်။
ငါကတော့ ငါ့သားသမီးတွေကို အမြဲတမ်း အတုယူခိုင်းတယ်။ ငါကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ့်ထက်ငယ်ပေမဲ့ လေးစားတယ်။ သူတို့မျက်နှာတွေကအမြဲတမ်း ကြည်လင်နေတယ်။ ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့်အေးချမ်းတယ်။ နင်တို့ကအလုပ်မရှိ အကိုင်မရှိ သူတို့အကြောင်းပြောကြရေးကြ တင်ကြ။ ငါကလည်း အားအားယားယား ၀င်ဖတ်ရ ပြောရနဲ့တော့ သဘာဝမကျသလို တွေ့လာတယ်။ နောက်တော့ နင်တို့ဘာတွေဘယ်လိုပဲပြောပြော အခုသူတို့ စူပါမားကက်ဖွင့်ဖို့ အိမ်တစ်လုံးထပ်ဝယ်လိုက်ပြန်ပြီမလား။နင်တို့ ပိုပြီးမနာလိုဖြစ်ကြမှာပေါ့။ပိုမုန်းကြမှာပေါ့ ။ ငါကတော့ အားကျတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ စူပါမားကက် ဘယ်မှာမှ မရှိသေးဘူးလေ။ အခုသူတို့ဖွင့်တော့မှာတဲ့။ငါတို့သံတွဲမြို့ဘယ်လောက်ဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းလဲ။
ဘယ်သူမှန်တယ် ဘယ်သူမှားတယ်ဆိုတာကို နင်တို့တွေ ဘယ်လိုပဲရှင်းပြရှင်းပြ ဘယ်သူကမှ စိတ်ဝင်စားတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါတောင် စိတ်မ၀င်စားဘူး။ ကျော်ကျော်တို့ကသူတို့တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းကိုပဲ ခေါင်းထဲမှာ စဉ်းစာပြီးအလုပ်နေကြတာ၊ငွေတွေရှာနေကြတာ။ ငါတို့ကသာ အချိန်ကုန်လူပန်း ၀င်ပြီးပြောနေကြတာ။သူတို့ အကြောင်းကိုပြောနေကြတဲ့သူတွေထဲမှာ ဘယ်သူကချမ်းသာနေကြလဲ။ ဘယ်သူဘာတွေ တိုးတက်နေလဲ။ သူများအကြောင်းကို ပြောကြတဲ့သူတွေဆိုတာ အလုပ်မရှိအကိုင်မရှိတွေဘဲ ပြောကြတာ၊ ငါလည်းအလုပ်မရှိ အကိုင်မရှိ ၀င်ဝင်ပြီးပြောနေရတာ၊ ပြောချင်တာလေးတစ်ခုကတော့ နင်တို့ဘယ်လိုပဲပြောပြော ဘယ်လိုပဲမုန်းမုန်း ကျော်ကျော်ကတော့ အမြဲတမ်း စင်ပေါ်ကမင်းသားပဲ။ နင်ရဲ့ ရုပ်ရည်နဲ့ ယှဉ်ဦးမလား။ ကျီးကန်းနဲ့ ဘဲဥ ။ ။ အရပ်အမောင်းကော ယှဉ်ဦးမလား။ ဆင် နဲ့ ဆိတ်ဟဲ့ နင့်အရပ်က 4ပေ 10 လက်မ ၊ကျော်ကျော်အရပ်က6ပေလောက်တော့ ရှိမယ်ထင်တယ်။ အဲမှာတင် နင်ရှုံးနေပြီ။ နင်ပေါက်ကရတွေ လုပ်မနေနဲ့ ဂျတိုပုရေ ။ နင်စဉ်းစားလိုက်။ အခုဈေးထဲမှာ မီးပေးမယ်ဆိုတော့ နင်ရဲ့စီးပွားရေးတွေရပ်သွားပြီမဟုတ်လား။ နင် ကျော်ကျော် မကောင်းကြောင်းတွေလိုက်တင်နေတာဟာ ကျော်ကျော် ဂုဏ်ကို မြှင့်ပေးနေတာနဲ့တူနေတယ်။ ကိုယ့် ဂုဏ်ကို ကိုယ်ချနေတာနဲ့ ထပ်တူညီနေတယ်။ ကျော်ကျော် ကို မဟုတ်တာတွေတင်ခံရတယ်ဆိုပြီး လူတွေက ၀မ်းနည်းစကားတွေပြောလေလေ နင့်ကို လူတွေ ပိုမုန်းလေလေဖြစ်နေပြီ။ ငါက နင့်ကို စေတနာနဲ့ သတိပေးတာနော်။ နင်နဖူးပေါ် လက်တင်ပြီးစဉ်းစားလိုက်ပါဦး။ နင့်ဘ၀က ဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲ ကျော်ကျော်ဘ၀က ဘာတွေဖြစ်သွားပြီလဲ။ နင်ရဲ့စီးပွားတွေကျဆုံးသွားသလား ။ ကျော်ကျော်ရဲ့ စီးပွားတွေကျဆုံးသွားသလား။ နင်စဉ်းစားသင့်ပြီ သူငယ်ချင်းရေ …………………
အိမမရေ.. ရေးချက်လေးတွေ ကချစ်စရာ ၊ သေချာရှင်းပြတတ်ပါပေတယ် ။
နောက်ဆုံးမတော့ ဝှက်ဖဲ လေးတစ်ချပ် ဖျပ်ကနဲ ထွက်လာရပြီပေါ့ ၊
ဒါလဲရိုးတယ် ဟ ၊ ဒို့ သံတွဲမြို့က နိုင်ထက်စီးနင်း လက်မခံဘူးနော် ၊
ပြောရဦးမယ် ၊ အိပ်မက်မက်ပြန်ပြီ၊ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်တဲ့ ။
ကောင်းကြောင်းလေးတွေ အပြည့်နဲ့ပါလား မမအိမဲရေ
လှုထားတာကလဲ မဖြစ်စလောက် တစ်သိန်းစ ၊ ငါသောင်းစ၊ ကုန်ကားက
စီးပွါးကျလို့ ရောင်းလိုက်ပြီ၊ တစ်စီးပဲကျန်တော့တယ်၊ နောက်ထပ်တစ်စီးက
ကားဟောင်းကိုပိုင်ပြီဆိုပြီး တစ်ရာ့ငါးဆယ်နဲ့ဝယ်၊ ခုတော့ ကွဲနေပြီမို့လား၊
38 နှစ်ဆိုတော့ ဒုက္ခတွေရင်ဆိုင်ရဖို့ အချိန်အများကြီးကျန်သေးတာပေါ့၊
အစကတည်းက ကောင်းအောင် နေပါလား၊ မနေပဲ လူတွေကို ဝေဒနာ ပေး
တာကြောင့် တန်ပြန်ခံရတဲ့သဘောပါ၊ ကံတရားဆိုတာ ဒါပဲလေ ၊
ဘယ်သူမှလုပ်တာမဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ်လုပ်ခဲ့လို့ ခံရတာ ၊
ဘယ်သူမပြု မိမိအမှု တဲ့ ။
♪♪♪ လိမ်တယ်ညာတယ် မေသခင်မရယ် ယုံအောင်ဖြီးပေါ့ကွယ် ♪♪♪
♪♪♪ လင်တော်မောင်ကို ချစ်ပါလျက်နဲ့ အလိမ်ခံမိတော့တယ် ♪♪♪
♪♪♪ ချစ်တယ်.. ချစ်တယ် .. ဆံရှည်မလေးကိုကွယ် ♪♪♪
♪♪♪ ချစ်တယ်…ချစ်တယ်…မင်းလို့ မထင်နဲ့ ကွယ် ♪♪♪
( ငယ်ရွယ်နုရွ ဆံရှည်မလေးကိုသာ )
ကိုသီဟ ရေ ပျောက်လိုက်တာဗျာ ကြာနေပီဗျာ မတွေ့ ရတာ။
ဒီကောင် Thantwethar(ခ)Thantweborn@gmail.com ကဘယ်သူဆိုတာ
ရှင်းနေစရာမလိုတော့ဘူး သိသာနေပီ ဒီကိစ္စမှာရော၊နာရေးကိစ္စတွေမှာပါ
ငွေကြေးလိမ်လည်ထားတာ အမှန်ဘဲ။ခုချိန်ထိ ဘယ်အလောင်းမှ ကူညီ
ထားခြင်းမရှိသလို၊ထောက်ပံ့ငွေ ပေးတယ်လဲမကြားမိရ ပါလား။ဒီကောင် ကတော့လေ
လည်လှချီရဲ့ ထင်နေလား မသိပါဘူး. သူ့ မေးလ်တောင် လိမ်ထားသေးသဗျ။
ကုသိုလ်ကောင်းမှူလုပ်တယ်ဆိုလဲ ကိုယ့်အဖွဲ့ အစည်းနဲ့ ကိုယ်လုပ်ပါလား၊ခုတော့ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ 
အလိုကျလား၊နင့်အလို ကျလား အတင်းဥက္ကဌ လုပ်ချင်နေရအောင်။ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ပါလား။
အေးအေးဆေးဆေးပေါ့ ။နေရာတိုင်းဝင်ပါမနေနဲ့ ပါကွာ။လူဆိုတာ အသက်တစ်ချောင်းတည်းပါ။စပါယ်ရာမပါဘူး ဆိုတာ
သိထားစေချင်ပါတယ်။ကမ်းနားကလူတွေ အကြောင်း သိပ်နားမလည်သေးဘူးနဲ့ တူတယ်။Thantwethar နင် ဘယ်သူဆိုတာ ငြင်းမရတော့
ဒီနေရာကနေ၍ ကျနော့်မိတ်ဆွေ များအားလုံးသိစေရန်ကြေညာပြောကြားရင်း၊ဆက်စပ်တည်း တောင်းပန်စကား
ဆိုအပ်ပါတယ်။ကျနော်၏ အမိုက်အမှားပြောမှားဆိုမှား၊အယူမှားများကို တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။ကျနော်သည်ဝန်ထမ်း
တစ်ယောက်အလျှင်းဖြစ်သည့်အားလျော်စွာဖြင့် မကြာခဏဆိုသလို အာဏာပိုင်တို့ အလိုကျပြောရဆိုရသည်မို့ကျနော့်အပေါ်
နောက်နောင်တွင် ဝင်ရောက်၍ အမှားကိုအမှန်လုပ်မပြောဆိုတော့ပါကြောင်းနှင့် ကိုအာရက္ခမြေသားနှင့်လဲ ဆွေးနွေးပြီးပါပီ။
သူလဲ နောင်တရနေပါပီ။နောက်နောင် ကန့် လန့် ဖြစ်စေမည့် အရာများဝင်ရောက်မပြောဆိုတော့ပါကြောင်း ကတိကဝတ်ပြု
ကျနော် တို့ ရပ်ရွာမှ ဖြစ်ပေါ်နေသော သတင်းများမှာ အတင်းမဟုတ်ပါဘဲ သတင်းအစစ်အမှန်များဖြစ်ပါကြောင်း ဝင်ရောက်
ထောက်ခံပါတယ်။အားလုံး ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ။
တစ်ကယ်ပြောနေတဲ့ ရင်ထဲကစကား ဟုတ်ရဲ့လားဗျာ ၊ ဟုတ်မယ်ဆိုရင် သူငယ်ချင်းကို
လက်ကမ်းကြိုဆိုပါတယ် ၊ အမှန်ဖြစ်တယ် ထင်တဲ့ကိစ္စကို ရပ်တည်ပေးသင့်ပါတယ်၊
နှလုံးသားထဲက လာတဲ့စကား ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်၊ ကျေးဇူးလဲ တင်ပါတယ်။
ကိုတုတ်ကြီးရော အာရက္ခမြေသား ရော အမှန်ဖက်က ရပ်မယ်ပြောလို့ ဝမ်းသာပါကြောင်း..။
ကိုသီဟ ပြောတာလေး ကြိုက်တယ်…၊ ဘာမှ တော့ ဝင်မပြောတော့ပါဘူး…၊
“ လန်ကျုပ်ရှင်းတမ်း ” ဆိုတဲ့ စကားလေး က မှန်လဲမှန် ..ထိလဲ ထိတဲ့ စကားပါ…။
ဒါလေးတစ်ခုတော့ ဝင်ပြောချင်လာလို့ ။
ကိုတုတ်ကြီးရဲ့ ရပ်တည်တော့မဲ့ အပေါ်ကို ကြိုဆိုပါတယ်၊ အာရက္ခမြေသားရဲ့ ရပ်တည်မှု
ကို သိပါရစေ၊ အများပြည်သူဖက်က တစ်ကယ်ရော ရပ်တည်မှာလား သိချင်ပါတယ်။
ကျနော်တော့ မယုံရဲသေးဘူးဗျာ . . ချက်ခြင်းကြီးဆိုတော့ တစ်မျိုးကြီးရယ် . .
သေချာရင်တော့ ကြေငြာ ပေးပါ ၊ ။
နင်တို့အားလုံး ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲပါပဲကွယ်။ အခု သတင်းတစ်ခုထွက်နေတယ်လေ.. သိပြီးပြီလား။
မကျေနပ်ရင် လာပြော မန်းဇက်မှာ တင်ပေးမယ်။ ဒါပေမဲ့ အလကား မရဘူးနော………… ဟဲ… ဟဲ တစ်ခါပိုစ့်တင်ရင် (……. ကျပ်) လို့ ပြောနေတယ်နော်…………. ။ ဒါသတင်းအသစ်လေးပါ။ ကိုယ်တင်ပေးတဲ့ ပိုစ့်က လူတွေကို ပြန်စစ်ဦး ဘယ်သူတွေ ဒီစကားပြောတတ်သလဲဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားဦး…………
အင်း အူတူတူနဲ့မမမေသခင်ရေ …တကယ်လို့ များဖြစ်နိုင်ရင်လေ ကိုကျော်ကျော်အကြောင်းအကောင်းပြောမယ့်သူ
သံတွဲသား(၁၀)ယောက်ခေါ်လာခဲ့ပါ။တိုက်တစ်လုံးနဲ့ နောက်ထပ်ကားတစ်စီးဝယ်ပေးလိုက်ပါမယ်။သိပ်ပြီးမွှန်းမနေပါနဲ့ 
လက်ရှိ အိမ်လှလှလေးဆိုတဲ့အိမ်ကိုဘဏ်မှာ ပေါင်နှံပြီးနောက်အိမ်တစ်လုံးထပ်ဝယ်ထားတာ ဒို့ ကမ်းနားကလူတွေတောင်
သိတယ်။မင့်တတ်နိုင်တာလောက်ကွာ ကလေးကစား စရာဖိုးတောင်မရှိပါလား။
ဟိုလူလိုလို၊အသိမိတ်ဆွေယောင်ယောင်၊ကိုယ့်ဘဲသူများက အားကျနေသယောင်ရမ်းမဖြီးပါနဲ့ တော့ကွာ။မရှက်ဘူးလား
ကိုယ့်လင်ကောင်းကြောင်း၊မယားကောင်းကြောင်း ကိုယ်တိုင်ထိုင်ရေးနေရတာ။တစ်ရက်၊တစ်ရက် မင့်တို့ မကောင်းကြောင်း
ဘယ်နေ့ ပါမလဲ ထိုင်ကြည့်နေရတာ ပင်ပန်းနေရော့မယ်။
ဒါလဲဟုတ်နေတာပဲ . လက်ရှိနေတဲ့ တိုက်ကို ပေါင် ၊ သိန်းလေးရာ့ငါးဆယ် နဲ့၊
ပီးတော့ အပေါင်ခံငွေနဲ့ တိုက်စုတ်တစ်ခုထပ်ဝယ်၊ မီးနီမတ်ကက်ဖွင့်မတဲ့၊
လစဉ် အတိုး ခုနှစ်သိန်းနီးပါး ( တစ်ကျပ်ခွဲနှုန်း) ၊ အင်း သနားတယ်၊
ဒီတစ်ခါတော့ သေချာစောင့်ကြည့်ရမယ်၊ မေသခင်ရေ မင့်ကောင်
မြို့တော်ခန်းမက ဆံရှည်မလေးကို အိမ်နဲ့ခြံဝယ်ပေးတာ မင်းသိရဲ့လား၊
ကိုယ့်မျက်ချေးကိုယ်မမြင် လုပ်မနေနဲ့ဦး၊ စုံစမ်းကြည့်နော်၊ ခိခိ…
သံတွဲမှာလူလာဖြစ်ရတာ ရှက်စရာကောင်းလိုက်တာ… အကြွားသန်လေ အောက်စလွတ်လေနဲ့
ကားဂိတ်ပိုင်ရှင် အကြောင်း ပို့စ်တစ်ခုတင်ရဦးမယ်.. ဘုရားအတွက်လှုတဲ့ ဘိလပ်မြေ တွေကို
အတုနဲ့လဲပြီး ဈေးကွက်စီးပွါးရေး တစ်ခု လုပ်လိုက်တဲ့ အကြောင်း၊ ဒီသတင်းက လူပေါင်းများစွာ
နဲ့ ပတ်သက်နေတယ်၊ ဘုန်းကြီးတပါး က ပင်ပင်ပမ်းပမ်း အလှုခံပြီးမှ ဘိလပ်မြေ တွေကို ယုံကြည်
လို့ ကားဂိတ်တစ်ခုနဲ့ တင်ပေးလိုက်တာကို အပိုင်ထုသတဲ့၊
ခုတော့ အဲဒီဘိလပ်မြေတွေက သုံးမရတော့ အားလုံးဒုတ်ခ ရောက်နေကြရပြီလေ၊
သာသနာပိုင်ပစ္စည်းကိုတောင်စားရဲတာ ၊ သွားရာလမ်းက အဝီဇိ ဆိုတာပဲ ရှိတယ်။
ဒေတာတွေ စုနေသမို့ နောက်ဆယ်ရက်စောင့်ပေးပါရန်၊
အင်းဗျာ မြို့ ကလူတွေမလဲဒုက္ခကမသေးပါလား။ငခုံးမကလဲ ဈေးမကောင်းဘူးဗျို့ ။ကျုပ်တို့ 
သံတွဲမြို့ ဆိုတဲ့လှေကြီးပုပ်ရတာ ဒါကြောင့်ဘဲနေမှာပါ။အကြွားတစ်ပိုင်းနဲ့ သူဌေးဖင်ပေါက်. ပါလားလို့ 
ပြောလိုက်ချင်တယ်။သူဌေးလိုလို၊ခွေးလိုလို လုပ်ပြမနေနဲ့ နင်ဘယ်လောက်ရှိတယ်၊မရှိဘူး
တို့ တွေသိပြီးသား။တစ်ဝိုင်းတည်းသောက်ဖော်သောက်ဖက်တွေမို့ ပြောလိုက်ရအုံးမယ်။တဝတပြဲ မျိုဆို့ ပြီးခါမှ
ပိုက်ဆံရှင်းမယ်ဆိုရင် မျက်ဖြူဆိုက်နေတဲ့ကောင်က များကြီးကျယ်နေလိုက်တာကွာ။
ဂရုစိုက်ပြီး ငွေကြေးကိစ္စကို ရှင်းပြပါလား။ကိုယ့်မှာရှိတာ လူကိုဖွင့်ပြောနေရလောက်အောင် အောက်တန်းကျလိုက်တာ
ကွာ။နောက်တစ်ခါထပ်ဆုံကြရင် အန်ဖတ်ဆို့ သေအောင်တိုက်ပေးပေါ့မယ်ကွာ။
အများအကျိုး ရွက်သယ်ပိုးက ခနိုခနဲ့ ဆိုကဲ့ရဲ့လဲ စိတ်ကောင်းနှင့်ယှဉ် ရှေ့ရှုနှင်လော့ လို့ ရွှေဟင်္သာ ဆရာတော်ကြီး မိန့်ခဲ့ဖူးတာပဲလေ…
ဒါပေမဲ့လဲ ဒီလိုသာနာဖျက်မျိုးနဲ့ကြုံတွေ့နေရတော့လဲ ခက်နေတာ..
admin ko kai ခင်ဗျား
ယ္ခု posts သည် ဖြေရှင်းသူ ဖက်မှ အမည်စဖေါ်ခြင်းဖြစ်ပါ၍ ဖျက်သိမ်းမှု မပြုလုပ်ပါရန်
အစွပ်စွဲခံနေရသူဟာ မြို့ အာဏာပိုင်များ ၏ အလိုတော်ရိ ဖြစ်နေပါတယ်။
မြို့ရဲ့ NGO အဖွဲ့အစည်းများကို ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးများ၊ အာဏာရှိသူများဖြင့်ပူးပေါင်းကာ
အတင်းဝင်ရောက် ဥက္ကဋ္ဌနေရာ ဝင်ယူသူလည်းဖြစ်ပါတယ်၊ စီးပွါးရေးသီးသန့်လုပ်၍
ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် လုပ်ပါလျှင် မြို့နေလူထုနှင့်မည်သူမှ ပြဿနာ မဖြစ်ပါ၊
သို့သော် ယ္ခုအစွပ်စွဲခံရသူသည် မည်သို့မည်ပုံ ယုတ်မာကောက်ကျစ်ပါကြောင်း
ဆိုင်ရာအသီးသီးမှ ဖုံးနံပါတ် ၁ဝ ခုခန့် ကို လိုအပ်ပါက သီးသန့်မေးဖြင့်ပို့ပေးချင်ပါသည်၊
ဆိုလိုသည်မှ ဤသို့ဖြစ်ပေါ်လာသော သတင်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စ ပွထခြင်း
မဟုတ်ပါကြောင်း အသိပေးစေလို၍ သာလျှင်ဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျား၊
အရေးယူမယ်ဆိုလဲ ဖြစ်နိုင်ရင် comment ပေးခွင့်သာလျှင်ရပ်စဲပေးပါ ကိုခိုင်
ဒီအရှုပ်ထုပ်က မြို့ရဲ့ (၄) ပုံ ပုံရင် (၁) ပုံခန့်လောက် ပြဿနာတွေ ဖြစ်အောင်
ဋ္ဌာနပိုင်းဆိုင်ရာ လူကြီးအားကိုးနဲ့ ဒေသခံတွေကို စိတ်နှလုံးညှိုးနွမ်းအောင်
ပြုမူနေတာ အရမ်းကြာခဲ့ပါပြီ၊ လူတစ်ယောက်ဆိုရင် အဖမ်းမခံရရုံတမယ်
ခံစားလိုက်ရပြီး လုပ်ကြံမှုက ရုန်းထွက်ဖို့ သိန်း ( ၃၀၀) နီးနီး ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်၊
သူ့ကြောင့် သူနဲ့ အဆင်မပြေ သူတွေကို အချုပ်ခန်းတွေထဲမှာ ထည့်ခဲ့တာ
၇ ယောက်ခန့် အမှန်တစ်ကယ်ရှိခဲ့ပါတယ်၊ ဒါတွေကြောင့်ပါ ။
အနီ တပ်ဖွဲနဲ့ အစိမ်းရောင်တပ်ဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ရဲ့တိုက်ပွဲ—————
သို့သော် ငြားလည်း တစ်စုံတစ်ခု ကို မြင်ရသလို ဖြစ်မိသည်မှာအမှန်တည်း ။
ထိုတစ်ယောက် ပြောသော ph: NO လေးများသိရပါက မေးကြည့်ချင်စိတ်
ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်စဉ်တွေပါ ၊ ဆိုင် / မဆိုင်တော့မသိဘူးဗျ ၊
အပျင်းပြေတာ ကတော့ အမှန်————–
ကိုယ့်ညီကို သံတွဲသားနဲ့ မေသခင်တို့ ရေ။ခုတော့ကျွန်တော်လဲ အရှက်နဲ့ အသက်လဲရတော့မလိုပါဘဲ။ကျွန်တော်က
အများစုသော အကောင့်ပေါင်းများစွာကိုစွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းက ကိုယ့်ဒေသမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ သတင်းများကို
လူပုဂ္ဂိုလ်တိုက်ခိုက်မှုများသော သူတစ်ဦးအပေါ် အများပြောသံနှင့် မြို့ ထဲတွေ့ ရာနေရာလိုက်၍
အခြားသူမဟုတ် ဦးခင်မောင်မြင့်၊မောင်သန်းထွဋ်ဦး၊မောင်စည်သူအောင်နှင့် ကိုထွန်းထွန်းဦးတို့ အပေါ်တွင်လက်ညှိုးထိုးအပုတ်ချနေသော
ဦးကျော်ကျော်၏ စကားကိုယုံစားမိ၍ဖြစ်သွားရပါတယ် ကိုယ့်ညီကိုတို့ ။
ကျွန်တော်ယူထားသော အာရက္ခမြေသားဆိုတဲ့ နာမည်နှင့် လိုက်ဖက်အောင် ရက္ခိတ စိတ်ဓာတ်အခံဖြင့် သိက္ခာရှိစွာ
တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။အမျိုးကိုသစ္စာတော်စောင့် သိပါရစေ။ကိုယ့်ညီကို တို့ ကိုသတိပေးပါရစေ။ကျွန်တော်က နောက်ထပ်seahorse ဆိုတဲ့အကောင့်တစ်ခုကိုလဲ ပိုင်ဆိုင်ထားသေးပါတယ်။အကောင့်နှစ်ခုလုံးသည် မိမိတစ်ယောက်တည်းဖြစ်ပါသောကြောင့် အားလုံးက
မောင်တုတ်ကြီး၏ နားလည်အောင်ဖေးမဆုံးမပေးမှုကြောင့် ယခုလိုဝင်ရောက်တောင်းပန်ရခြင်းအပေါ် ကျွန်တော့်အပေါ်နားလည်ပေးနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်မိပါတယ် ကိုယ့်ညီကိုတို့ ခင်များ။ယနေ့ ထိမန္တလေးဂေဇက်ပေါ်တွင် တက်လာနေသော
သတင်းဝလင်းအစုံအလင်မှာ နစ်နာသူပြည်သူများ၏ ရင်တွင်းကအသံများဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ကိုယ့်ငချဉ်ကိုယ်ချဉ်နေသော သံတွဲသားနှင့်မေသခင်
တို့ မှာ အမှန်တကယ် မြို့ နေလူများစု၏ ချဉ်ဖတ်ဖြစ်နေပီဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်နားလည်သဘောပေါက်သည့်နည်းတူ အများနားလည်အောင်ဝင်ရောက်
အာမခံလိုက်ရပါတယ်။ကိုယ့်ညီကို တို့ ကနားလည်မှုလေးပေးခွင့်လွှတ်ပေးစေချင်ပါတယ်။
ကို အာရက္ခမြေသားနဲ့ ကိုတုတ်ကြီးတို့ကို ဝမ်းပမ်းတသာ ကြိုဆိုပါတယ် ၊
ကျေးဇူးလဲ အများကြီးတင်မိပါတယ် ၊
ဘာပြောရမှန်း မသိတော့လောက်အောင်ပါ ….၊
ကျနော်တို့ ဒေသမှာလဲ တရားမျှတမှု က အားနည်းတယ်ဆိုတာ မိတ်ဆွေတို့အသိပါ…၊
မြို့ပတ်ပြီး ရှုပ်နေတာ ဘယ်သူတွေပါလဲ …၊
အားနည်းသူ လူများစုကို ကူညီဖို့ အမြဲကြိုးစားနေသူ ဘယ်သူတွေပါလဲ … ၊
ကျနော်တို့တွေဟာ ကယ်တင်ရှင် မဟုတ်တာ အားလုံးအသိနော် *… ၊
ဒါပေမဲ့ တတ်နိုင်ခွန်အား ဆိုတာလေးကို အလေးအနက်ထားပါတယ်ဗျာ…။
လက်ကမ်း၍ ကြိုဆိုပါသည် ညီနောင်ရောင်းရင်းတို့ . . အံ့သြမိပါတယ် . .
ဘယ်လို သဘောပေါက်သွားလို့ပါလိမ့်နော် . . ဒါပေမဲ့လဲလေ . .
ကိုယ့်မွေးရပ်မြေလေးကို တတ်နိုင်သလောက် ကူညီ သွားကြရအောင်ပါ . .
ဒီနေ့တော့ ဘီယာ အဝ သွားမော့တော့မယ်
ခုပဲ စည်ဘီယာဆိုင်က်ို ချီတက်တော့မယ်
အမှန်တရားဆိုတာ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ ညီညွတ်မျှတမှုအပေါ်တည်တယ်၊သတင်းသမားဆိုတာအမှန်တရားနဲ့ပြည်သူအပေါ်မှာတည်တယ်၊အမှားဆိုတာလူတိုင်းမှားတတ်ကြတာဘဲ အမှားကိုခွင့်လွှတ်နိုင်သူတွေဟာ လူတော်လူကောင်းဖြစ်သလို အမှားကိုဝန်ခံသူဟာလဲလူတော်တွေပါဘဲ။ အာရက္ခမြေသားနဲ့မောင်တုတ်ကြီးတို့ရဲ့ ၀န်ခံမှုကို စွတ်စွဲခံရသူတွေက နားလည်ခွင့်လွှတ်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်မိပါတယ်၊
သတင်းသမားကတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ဘ၀ဒုက္ခတွေကို အစိုးရနဲ့ ပြည်သူအများ သိရှိဘို့အတွက် အမြဲကျိုးပန်းနေမှာဘဲ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဆိုတာ ပြဿနာတွေနဲ့ရောပြွှန်းနေတတ်ပါတယ်၊ ဒီလိုဘဲ သူတစ်ပါးကိုဒုက္ခရောက်စေပြီးမှ ကိုယ်တိုက်ဆောက်ကားဝယ်နိုင်တဲ့လူမျိုး အုပ်ချုပ်သူအာဏာပိုင်ကို ကိုယ်လိုသလိုအသုံးချပြီး ပြည်သူ တံတွေးထဲမြောစေတဲ့လူမျိုးတွေဟာ လူ့ဘောင်ထဲမှာရှိပါတယ် ဒီလိုလူမျိုးတွေကို သတင်းသမားတွေတင်မက ပြည်သူတွေဟာ အစိုးရအုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီး တိုက်ဖျက်ရမှာပါ ဒါမျသာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြည်သူတွေဟာအေးချမ်းတဲ့ဘ၀ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်၊
ခုတော့ ငကြွား စုံတွဲ ဘဲ ကျန်တော့တယ် . .
အေးချမ်းမဲ့ နိမိတ်တော့ နီးစပ်လာပြီ . .
ကြွားချက်ကတော့ လက်လန်တယ်. . ဟုတ်လဲဟုတ်ဘဲနဲ့. .
ဒီဂနေ့မှ သတင်းကြားတယ်. . ဘာတဲ့. . တရားစခန်းက ဘိလပ်မြေသူခိုး ဆိုဘဲ . .
ပြည်သူ့အင်အားစုဖက်က မဲ အပြတ်အသတ်နဲ့ အနိုင်ရသွားတာများလား———-
ကဲ ——— မင်း စဉ်းစား ————–
maythakhin က အဓိက ဇွတ်အတင်းရှင်း—————
ကိုယ်အထုပ်ကိုဖြေပြနေတဲ့ ဟေ့ကောင်လင်မယားတွေ။ခုတော့ အားလုံးသူ အသိဖြစ်သွားပီ။
ကူပြီးလိမ်ညာပေးမယ့်လူလဲ မရှိတော့ဘူး။ပုပ်သမှ ကမ္ဘာကျော်အောင် ပုပ်သွားတယ်ဗျာ။
အိမ်မှာပါဖေါက်နေလေတော့ ……ခက်လှချီရဲ့ ငါ့ကောင်ရာ။
ဟိုက် အားပါးပါး. တကယ့်ကိုမယုံနိုင်စရာပါလား။အိမ်မက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ခင်များတို့ လို လူ့ တိရိစ္ဆာန်တွေဆီက
ခုလိုမျိုး ကြားရတာ. နွေခေါင်ခေါင် အိမ်မက်လား၊ဆောင်တွင်းကြီးမိုးကြိုးပစ်လိုက်သလိုပါလား။ခုလိုအမြင်မှန်လေးရသွား
တော့လဲ မုဒိတာပွားရတာပေါ့ဗျာ။တကယ်နစ်နာတဲ့ ပြည်သူတွေဖက်ကရပ်တည်ပေးရင်း. ပကွက်သားလိုလို၊ခွေးလိုလို ပြိတာကောင်
မနောက်ပါနဲ့ ကိုကိုတုတ်နဲ့ ကိုအာရက္ခ တို့နော် . .
နှလုံးသားအမှန်နဲ့ပြောတယ်ဆိုရင် သံတွဲ ပို့စ်လေးတွေမှာ မှန်ရင်မှန်တယ်
မှားရင်မှားတယ် လွဲရင်လွဲတယ် ဝေဖန်ပေးကြပါစို့. .